नयाँ सरकार कहिले बन्ला ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नयाँ सरकार कहिले बन्ला ?
माघ २८ गते, २०७४ - ०६:३१
आजको कान्तिपुरमा खबर छ-२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेको १ सय २१ र माओवादी केन्द्रको ५३ गरी १ सय ७४ सिट छ। सरकार गठनका लागि कम्तीमा १ सय ३८ सिट आवश्यक हुन्छ। पार्टी एकताको छलफलमै अल्झिएका यी दुई दल सरकार गठनका विषयमा अझै प्रवेश गरिसकेका छैनन्।
माघ २८ गते, २०७४ - ०६:३१ मा प्रकाशित